"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : Crackers နဲ့ Hacker ကိုကွဲပြားအောင် သိထားကြဖိုလိုပါတယ်
Crackers နဲ့ Hacker ကိုကွဲပြားအောင် သိထားကြဖိုလိုပါတယ်
အောက်ဖေါ်ပြပါ Post လေးကိုသဘောကျတယ်ဗျာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Crackers နဲ့ Hacker ကိုကွဲပြားအောင်မသိကြသေးဘဲ ဟက်ကာတွေကို ပုဒ်ခတ်ရေးသားနေသူတွေကို အသိပေးချင်တာလည်းပါတယ်၊ ဟက်ကာ တစ်ယောက်ရဲ့အရည်ချင်းတွေကိုတော်တော်စုံစုံလေး ရေးသားပြထားလို့ ကူးယူတင်ပြပေးလိုက်တာပါ ဒီ Post ကို နည်းပညာဖလှယ်ရာ မှာဝင်ရောက်ဖတ်မိလို ပြန်လည်မျှဝေချင်တဲ့ စေတနာလေးဖြစ်လာတယ်၊ ကျနော်ဆိုဒ်မှာ Post တင်တာအားနည်းတယ်
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ Page တွေကိုဦိးစားပေးရေးနေရလို့ဖြစ်ပါတယ် Post တွေအားနည်းတော့ စိန်ဝင်စားသူနည်းပါးပြီး ဆိုဒ်ထဲ လူဝင်နည်းပါတယ် သို့သော်လည်း ကျနော်ဆီဝင်လာသူတွ ဟာ ပညာလိုချင်သူများသာ ဖြစ်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ အခြား ဝက်ဆိုဒ်များက ကူးယူမျှဝေနေသူတွေ တော်တော်များများ ရဲ့အားနည်းချက်က ဝိတက်နဲ့ ကြံသိစိတ်ထဲမှာ ကို့အယူနဲ့ ကိုက်ညီတယ် ဆိုပြီး ကူးယူဖေါ်ပြ နေကြပေမဲ့ မှန်၏ မှား၏ ကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ ပညာအားနည်းသူတွေ ကိုတွေ့ ရပါတယ် ကူးယူဖေါ်ပြချက်ရဲ့ အကျိုးပြစ်လောက်ကိုတော့ တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ ပညာမျက်စေ့လေးရှိဖိုတော့ လိုပါတယ်။ ကျတော်လူတော်မဟုပ်ပါ ကျနော် အလွန်ကြိုးစားသူသာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ အဖိုးတန် Post လေးကို ဟက်ကာ အကြောင်း ကောင်းကောင်း မသိသူရော ဟက်ကာ ဖြစ်ချင်သူများပါ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုကြပါကုန်။
ဟက်ကာဖြစ်ချင်တယ်။ ဟက်ကာဆိုတာဘာလဲ… ဒီမေးခွန်းက အရမ်းကိုတွေ့ရတာများပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သေချာမသိပါဘူး။ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးတော့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းရတာကို နှစ်သက်တဲ့သူ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့သူတွေကို ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟက်ကာဆိုတာ ကွန်ပျူတာ လောကမှာပဲရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး… တခြားသော Science ဒါမှမဟုတ် art တစ်ခုခုမှာ အမြင့်ဆုံးအခြေအနေအထိ ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုလည်း ဟက်ကာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်တာကိုပဲ ပြောမှာပါ။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဟက်ကာပါလို့ ပြောနေကြတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ မဟုတ်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့်တောု့ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း လုပ်ဆောင်ပြီး… ကွန်ပျူတာစနစ်တွေကို ချိုးဖြတ်ဝင်ရောက် အတားအဆီးတွေကို ကျော်လွန်နိုင်တယ်ဆိုပြီး လေကျယ်နေကြတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်အများစုပါ။ တကယ့် ဟက်ကာ အစစ်တွေကတော့ သူတို့ကို ကရက်ကာ(crackers) လို့ခေါ်ကြပါတယ်… တကယ်တော့သူတို့က ဘာမှအထင်ကြီးစရာ မရှိပါဘူး…။ တကယ့် ဟက်ကာအစစ်တွေကတော့ အဲဒီကရက်ကာတွေဟာ ပျင်းရိတဲ့သူတွေ၊ တာဝန် မယူတတ်တဲ့သူတွေ၊ ဥာဏ်မကောင်းတဲ့သူတွေလို့ပဲ တွေးကြပါတယ်… security တွေကို ချိုးဖောက်ကျော်လွန်ပြီး ၀င်ရောက်နိုင်ယုံနဲ့တော့ ဟက်ကာ မဟုတ်ပါဘူး… ။ ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းစရာက စာရေးဆရာတွေ ဂျာနယ်လစ်တွေက ဟက်ကာဆိုတဲ့ စာလုံးကို သုံးပြီးတော့ပဲ အဲဒီခရက်ကာတွေအကြောင်းကို တွင်တွင်ကြီး ဖော်ပြနေတော့တာပါပဲ။ အဲဒီအတွက်တော့ ဟက်ကာအစစ်တိုင်းက စိတ်ပျက်ကြရပါတယ်။ သူတို့ကြားက အခြေခံခြားနားမှုကတော့ ကွန်ပျူတာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အများစုနားလည် ထားကြသလိုပါပဲ… hackers build things, crackers break them ပါပဲ….။
ဟက်ကာဖြစ်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ… အဓိကအဖြေကတော့ စာဖတ်ပါ… များများဖတ်ပါ။ ဟက်ကာတယောက်ထားရှိတဲ့ သဘောထားတွေကိုပြောချင်ပါတယ်…။ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းပြီး.. အသစ်အသစ်တွေ ဖန်တီးတယ်။ တည်ဆောက်တဲ့ သူတွေကမှာသာ ဟက်ကာတွေပါ။ အင်တာနတ်ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတွေ.. Operating System ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတွေ… world wide web ကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာအောင် လုပ်ခဲ့သူတွေက ဟက်ကာတွေပေါ့။ ဟက်ကာတွေက လွတ်လပ်မှုနဲ့ အပြန်အလှန်ကူညီမှုတွေပေါ်မှာ ပျော်မွေ့တဲ့သူမျိုးတွေပါ။ ဟက်ကာဖြစ်ချင်ရင်တော့ အဲဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိဖို့လိုပါပြီ။ တကယ် ရှိလာဖို့ကတော့ တကယ်လုပ်ရတော့မှာပေါ့…။ဆရာကြီးဖြစ်ချင်ရင် ဆရာကြီးတွေရဲ့စိတ်ထားကို အတုခိုးရမှာပေါ့…။ ပညာရပ်ပိုင်းမှာသာမကပဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ကကဗျာလေးအတိုင်းပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဟက်ကာဖြစ်ချင်ရင် အဲဒီအတိုင်း သင်ယုံကြည်လာတဲ့အချိန်အထိ ထပ်ခါထပ်ခါ ကြိုးစားပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးက ဖြေရှင်းခံရဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ပြသနာတွေနဲ့ နေ့တိုင်း ပြည့်နှက်နေ ပါတယ်။ ဟက်ကာတယောက် ဖြစ်ရတာတော့ အရမ်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်… ဒါပေမယ့် အဲဒီပျော်စရာတွေရဖို့ ကြီးမားတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ လုပ်ကြရပါတယ်။ ဟက်ကာဖြစ်ဖို့အတွက် ပြသနာတွေဖြေရှင်းရတာကို ပီတိဖြစ်တတ်ရမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အမြဲတမ်း ချွန်မျှနေအောင် သွေးနေရမယ် ကိုယ့်ပညာကိုအမြဲတမ်း လေ့လာနေရပါမယ်။ သင့်အနေနဲ့ ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီလို စိတ်ခံစားချက်မျိုး ရှိမနေဘူးဆိုရင်တော့ တော်တော်ကြိုးစားယူရဦးမှာပေါ့။ သင်တခုခုလုပ်တဲ့အခါ လေ့လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ယုံကြည်မှုတခုကို ထားရှိဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သင်ပြသနာတ ခုကိုဖြေရှင်းတော့မယ်ဆိုရင် အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအားလုံးကိုတော့သင်သိထားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့သင်သိပါလိမ့်မယ်… အဲဒီတစ်ပိုင်းလေးကနေဆက်ပြီးလေ့လာ..လေ့လာရင်းနဲ့ တစ်ပိုင်းပြီးတစ်ပိုင်းပိုပြီး နားလည်လာ.. နောက်ဆုံးမှာတော့ အောင်မြင်သွားမှာပါ။
ဘယ်ပြသနာကိုမဆို နှစ်ခါဖြေရှင်းဖို့ အကြောင်းကို မရှိပါဘူး။ နားမလည်တော့ဘူးလား..။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချိန်တွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်တွေက အရမ်းတန်ဖိုးရှိတာပါ။ လုပ်ပြီးသား ကိစ္စတခုအတွက် အချိန်ထပ်အကုန်ခံရတယ်။ ပြသနာအသစ်တွေ စောင့်နေတာကို အဟောင်းတွေကိုပဲ ထပ်ဖြေရှင်းမနေသင့်ဘူးလေ။ ဟက်ကာတွေ စဉ်းစားနေရတဲ့အချိန်က အရမ်းအဖိုးတန်တဲ့အတွက် သင်က ဟက်ကာဆိုရင် သင်သိတာတွေ မျှဝေပေးသင့်ပါတယ် သင်သိတဲ့ solution တွေကို တခြားဟက်ကာတွေကို ဖွင့်ပြပေးရင် ကောင်းမှာပါ။ ဒါမှ သူတို့တွေလည်း တခြားအသစ်အသစ်တွေ ဖြေရှင်းနိုင်တာပေါ့။ တခုတော့ရှိတာပေါ့… ပြသနာတခုအတွက် အဖြေဆိုတာ တခါတရံမှာ တခုထက်မကလည်း ရှိနိုင်တယ်နော။
ဟက်ကာ(ပြောရရင်တော့ Creative people တွေပေါ့)သူတို့တွေက လွတ်လပ်မှု (Freedom) ကို နှစ်သက်ပါတယ်။ သူတို့အပေါ်မှာ authority လာပြတာကို ယေဘူယျအားဖြင့် မနှစ်သက်ကြပါဘူး… ချူပ်ချယ်မှုတွေကို မုန်းတီးပါတယ်။ သူတို့က အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရတာကိုတော့ နှစ်သက်ကြတဲ့ သူတွေပါ။ အဲဒီ စိတ်ထားမျိုးလေးလည်း ရှိရပါမယ်။ အထက်က စိတ်ထားမျိုးတွေ အမူအကျင့်တွေ ရှိပြီးရင်တောင်မှ ဟက်ကာ မဖြစ်သေးပြန်ပါဘူ။ ဟက်ကာဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ပညာရပ်မှာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ များများလေ့ကျင့်မှု၊ အသေအချာ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အလုပ်ကြိုးစားမှုတွေလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။
Attitude တွေက အရေးကြီးတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ Skills က ပိုအရေးကြီးပြန်ပါတယ်။ တခြားသူတယောက်က သင့်ကို ဟက်ကာတယောက်လို့ ခေါ်စေဖို့ သက်မှတ် လာစေဖို့အတွက် အရင်ဆုံးသင်လုပ်ရဦးမဲ့ အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေ ပြောချင်ပါတယ်။ အရင်ဦးဆုံးတော့ Learn How to Program ပါ။ ဒါကဟက်ကင်းမှာတော့ အခြေခံအကျဆုံးပါပဲ။ programming language တခုမှ မသိပဲနဲ့တော့ ဘယ်လို ဟက်ကာဖြစ်ပါ့မလဲနော့်။ ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူး.. ။ ဘာ language မှ သင်မတတ်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ Python ကို စလေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ပထမဆုံး လေ့လာသင့်တဲ့ language တခုလို့ သေချာမပြောနိုင်ပေမယ့် beginner တွေအတွက် သင့်တော်သလို powerful လဲဖြစ်ပါတယ်.. ပရောဂျက် ကြီးကြီးမားမားကြီးတွေလည်း သူ့ကိုသုံးပြီးလုပ်နိုင်တာ လုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ C ပါ C++ ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ။ သင်တခုခုကို ကျွမ်းကျင်ရင် နောက်တစ်ခုဆိုတာ အရမ်းလွယ်သွားပါပြီ။ ဘယ်အရာမှတော့ စလုပ်ရင် လွယ်တယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ဟက်ကာတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ နောက်ထပ် language တွေကတော့ Perl နဲ့ Lisp တို့ပါပဲ။ မရေးနိုင်ရင်တောင် ဖတ်နိုင်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အားလုံး လေ့လာတာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ programming ကို မတူညီတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ချည်းကပ်တာပေါ့ ။
အဲဒါအားလုံးက သင့်အတွက် အကျိုးဖြစ်စေမှာပါပဲ။ Hacker တယောက်ရဲ့ skill level ကို language တတ်ယုံနဲ့လည်း မဖြစ်ဘူးနော်။ Language တွေအပေါ်မှာမှီခိုမှုမရှိဘဲ ပြသနာတွေ အပေါ်မှာ စဉ်းစားနိုင်ဖို့လည်း လိုသေးတယ်။ သိပြီးသား concept တွေကို ဆက်စပ်တွေးခေါ်နိုင်ပြီး language တခုကို အသစ်ထပ်လေ့လာရင် ရက်အနည်းငယ်လောက်နဲ့ ရနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ တော်တော်ဟုတ်လာပါပြီ။ ဆိုလိုချင်တာက ရှိရှိသမျှသော language တွေအားလုံးသင်တတ်တယ်ပေါ့။ ရက်အနည်းငယ်နဲ့ တခုတတ်ပြီဆိုမှတော့ ဘာကြာမှာလဲနော်။
programming language လေ့လာတယ်ဆိုတာ natural language ကိုလေ့လာသလိုပါပဲ။ အထက်က ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ ရေးထားတာတွေကို များများဖတ် ပြီးရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲနဲရေး၊ နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ များများဖတ်၊ များများထပ်ရေး၊ ပိုပြီးဖတ်၊ ပိုပြီးရေး……၊ ဘယ်အချိန်ထိ လုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ သင်ရေးတာတွေက ဈေးကွက်ဝင်တဲ့ အဆင့်အထိပေါ့။ အရင်တုန်းကတော့ coding ကောင်းကောင်းရှာဖတ်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ open source နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ software တွေ ၊ Programming tools တွေ၊ operating system တွေ(အဲဒါတွေအားလုံး ဟက်ကာတွေ လုပ်ထားတာ) အများကြီးရှိနေပါပြီ။ ဟက်ကာ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အခုချက်ချင်း Linux ဒါမှမဟုတ် BSD-Unixes မဟုတ်ရင်လည်း OpenSolaris သင့်ကွန်ပျူတာမှာ Install လုပ်လိုက်ပါတော့။ သြော်သင်က Windows က ဘာဖြစ်လို့လည်းလို့ မေးတယ်လား… သူက binary တွေနဲ့ distribute လုပ်ထားတာလေ.. code တွေမှ ဖတ်လို့မရတာ ပြင်လို့လည်း မရဘူးလေ သင်မဖြစ်မနေ Unix တခုကိုတော့ လေ့လာ ရမယ်ဆိုရင် အလွယ်ကူဆုံးအနေနဲ့ Linux ကို ကောက်ကိုင်လိုက်တော့လေ။ မပူပါနဲ့ သင်အခုသုံးနေတဲ့ Windows ကြီးနဲ့လည်း တွဲတင်ထားလို့ ရပါတယ်။ ကဲအခုချက်ချင်း Learn it , Run it နော်။ ကလိတော့နော်။ အင်တာနတ် ကိုလည်း အပီ မွှေနှောက်တော့နော်… code တွေကိုဖတ် ပြီးရင်ပြန်ပြင်ရမယ် နော်.. ။ သင်ပျော်မွေ့လာမှာပါ… အသိပညာ ဗဟုသုတအသစ်တွေကို အရသာခံပြီးတော့ လေ့လာသင်ယူလိုက်စမ်းပါ..။ တခါတည်းပြောပြလိုက်မယ်နော်.. Beginner တွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးကတော့ Ubuntu ဖြစ်လာနေပြီ… ကြုံတွေ့ရမယ့် ပြသနာတွေအတွက်လဲမပူပါနဲ့ သင့်ကို ကူညီမယ့်သူတွေ အများကြီးရှိနေတယ်လေ။ အားလုံး အဆင်ပြေရစေမယ်။ ဟုတ်ပပြီ ဟက်ကာ ဖြစ်ချင်သူတွေအတွက် နောက်ထပ် လေ့လာစရာတခုကတော့ World Wide Web ကြီးပေါ့။ Browser တစ်ခုခုကို သုံးတတ်ရမယ်နော် (အဲဒါကလူတိုင်းလုပ်တတ်တယ်)၊ HTML ရေးတတ်ဖို့တော့ အရင်လေ့လာရမယ်။ ဘာ language မှ မတတ်တဲ့သူအတွက် HTML ကို စလေ့လာလိုက်ရင် သင်ယူတဲ့နေရာမှာ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ရစေမယ်။ အကူအညီ အများကြီး ဖြစ်စေမှာပါ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် home page တစ်ခုကို HTML နဲ့ရေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ ပြီးရင် XHTML ဆိုတဲ့ဆီလေးကိုကူးကြည့်။ ဒါနဲ့ဟက်ကာဖြစ်မယ်ထင်လို့လား။ Website တစ်ခုရေးနိုင်ပြီဆိုရင်တောင်မှ Hacker ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ သင်နဲ့ အဝေးကြီးပါ.. ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Web ပေါ်မှာ website တွေများများလွန်းလို့.. ဒါပေမယ့် အများစုက ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းလည်းမရှိ တည်ဆောက်ထားပုံကလည်း ညံ့မှညံ့။ သင့်ရဲ့ page မှာတော့ content တွေကို ကောင်းကောင်းထည့်ရမယ်.. စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းအောင်ရေးရမယ်။
ပြသနာတခု ထပ်တွေ့ပြန်ပြီ သင့်ရဲ့ English စာတတ်မြောက်မှု အဆင့်အတန်းက စကားပြောတော့မယ်။ Internet နဲ့ Hacking နယ်ပယ်ထဲမှာ English စာကပဲလွမ်းမိုးထားဆဲပါပဲ။ Hacker Community ထဲမှာ ၀င်ဆံ့ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ English စာတစ်ခုကိုတော့ သင်ပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုတာအမှန်ပါပဲ။ အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ အသုံးပြုရတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတွေက English ကိုသုံးမှသာ အဆင်ပြေတာများပါတယ်။ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေရှိပေမယ့် အဲဒါတွေဟာ အမှန်တကယ်တော့ စိတ်ကျေနပ်စရာ မကောင်းပါဘူး။ သူများရေးထားတဲ့ code ထဲမှာပါလာမယ့် comment တွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်း သင် English စာတတ်မှဖြစ်မှာပေါ့။ Native English Speaker တစ်ယောက် တောင်မှ တခါတရံမှာ Hacker တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ Language Skills ရှိမယ်လို့ ဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်ဘူး.. သင်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလဲ..။ ကြိုးစားနိုင်မှာ တော်ရုံလောက်ရမယ်ထင်တယ်နော်။ သင့်ရဲ့ အရေးအသားက ညံ့မယ်။ Grammer လဲမကျဘူး.. ၊ သတ်ပုံအမှားကလည်းများမှများဆိုရင် ဘယ်ဟက်ကာ ကမှ သင့်ရေးတာကို ဖတ်ချင်စိတ်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလေ.. ။ ကဲ အခုပဲ စကြိုးစားပေတော့။
Hacker Culture ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ပြသနာတွေကိုသင်ကဖြေရှင်းမယ်။ ရလာတဲ့ သင့်ရဲ့ Solution တွေက တကယ်ကောင်းရဲ့လားဆိုတာ သင့်ရဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ ဆရာတွေက အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မှတ်သားထားရမယ့်တစ်ခုက သင့်ကိုယ်သင် Hacker လို့သတ်မှတ်ထားတာဆိုရင်အဲဒါက သံသယဖြစ်စရာကောင်းပါသေးတယ်။ တခြားဟတ်ကာအစစ်တွေက သင့်ကို ဟတ်ကာ ပါလို့ အသိအမှတ်ပြုမှသာ သင်တကယ်ဖြစ်တာပါ။ သင့်ရဲ့ တတ်မြောက်မှုကို အခြားသူတွေသိဖို့ Reputation ကောင်းလာဖို့ဆိုတာ သင့်အနေနဲ့တခြားသူတွေကို ကူညီဖို့လိုပါတယ်။ Open Source Software တွေရေးကို ရေးရပါမယ်။ အဲဒါက အခြေခံအကျဆုံးပါပဲ။ သင်ရေးပြီးရင်လည်း တခြား ဟတ်ကာတွေ လေ့လာသူတွေအတွက် ပြန်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Soruce တွေကိုချပြရပါမယ်။ အဲဒီ Software မျိုးကို လူတွေက Free Software လို့ခေါ်တတ်ကြပါတယ်.. တကယ်တော့ Open Source Software လို့ပဲသုံးတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမိုင်းထဲမှာတော့ 1996 ခုနှစ်ပိုင်းလောက်အထိတော့ ဟက်ကာဆိုတာ Closed Program Closed Source တွေပဲရေးသားခဲ့တာပါ။ 1997 နောက်ပိုင်းကြမှ ဒီ Culture ကပြောင်းလဲလာတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Hacker Community နဲ့ Open Source Developers ဆိုတာ ယနေ့ခေတ်မှာတော့ တူညီတဲ့ Culture ရှိလာနေပါပြီ။ သင်ဟာ Newbie တစ်ယောက်ဖြစ်ရင်တော့ ကူညီရေးသားခြင်းကနေအစပြုသင့်ပါတယ်။ သင်စိတ်ဝင် စားတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုကိုရွေးပြီး လုပ်သင့်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ progress က Program တွေကိုကူညီစမ်းပေးမယ်။ ကူညီအမှားရှာပေးမယ်။ ကူညီပြီး modify လုပ်ပေးမယ်…အဲဒီလိုပေါ့။ အဲဒီလိုလေ့လာရင်းနဲ့ အများကြီး သင်သိလာပါလိမ့်မယ်။ နောက်တခု အရေးကြီးတယ်နော် သင့်ကို နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ကူညီမယ့်သူတွေနဲ့ Karma ကောင်းကောင်းဖြစ်စေမှာပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး အသုံးဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို လူတွေကို ပြောပြတဲ့သူ ဖြစ်ရင် ကောင်းပါတယ်။ ဥပမာ FAQs လိုဟာမျိုးတွေ သင်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသင့်ကို လူတွေ ပိုလေးစားလာမှာပေါ့။ ဟက်ကာတွေမှာ ခေါင်းဆောင်ရယ်လို့ ရှိလေ့မရှိပါဘူး။ အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကိုဦးစားပေးပါတယ်။
အခုကျွန်တော် Hacker Mindset အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ်မရှိနေတဲ့အချိန် ဟက်ကာအများစုလုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာတွေကိုလမ်းညွန်ချင်တာပါ။ သင်လည်းလုပ်ချင်ရင်လုပ်လို့ရတာပေါ့။ သင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ ရေးသားပြောဆိုနိုင်ပါစေ။ သင်သိရဲ့လား ဟက်ကာတွေက စာရေးအင်မတန်ကောင်းတဲ့သူတွေပါတဲ့။ Science Fiction တွေကို ဖတ်ပါ။ Martial-art တစ်ခုခုကိုလေ့ကျင့်ပါ။ ဟက်ကာတွေ့လေ့ကျင့်ကြတာတွေရှိတယ် ကရာတေး တိုက်ကွန်ဒို ကွန်ဖူးတွေလေ။ သေနတ်ပစ်တာလည်းကောင်းပါတယ်။ တရားဥပဒေနဲ့ ညှိမယ်နော်…. Tongue ။ တေးဂီတကို ခံစားတတ်ပါစေ။ Muscial Instrument တခုခုကို တီးတတ်ရင် ကောင်းပါတယ်။ ဒါတွေက အရမ်းကြီး အရေးမပါပေမယ့် တစုံတရာကောင်းကျိုးတော့ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ မကျေနပ်နေပါနဲ့။ ဟက်ကာအများစုက အများအမြင်မှာတော့ Programmer တွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဟက်ကာအစစ်တွေက တခြားဆက်နွယ်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာလဲ ကျွမ်းကျင်သူတွေပါ။ System Administration, web design ပြီးတော့ PC Hardware troubleshooting အစရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်း ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ System Administrator လို့ပြောတဲ့ ဟက်ကာတယောက်က Script Programming နဲ့ Webdesign အပိုင်းတွေမှာလဲ Skill ကောင်းကောင်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေက ယောင်ဝါးဝါးတွေတော့ မဟုတ်ကြဘူးနော်… သူတို့ အကျွမ်းကျင်ဆုံးအရာဆိုပြီးတော့ သီးသန့်လည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို သင်ဖတ်ပြီးရင်သင် ကျွန်တော့်ကိုမေးခွန်းတွေ ထပ်မေးချင်မှာ သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းတွေကို တခါတည်း ကျွန်တော် ဖြေပေးလိုက်ပါမယ်။
Q: ကျွန်တော် ဟက်ကာတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
A: *သင် Coding တွေကို အရမ်းကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရေးနိုင် ဖတ်နိုင် အသုံးချနိုင်နေပြီလား?
Q: ဘယ်လိုဟက်ကင်းလုပ်ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကိုသင်ပေးမှာလား?
A: ကျွန်တော်ဒါရေးရင်ဒီလိုအပြောခံရမယ်ဆိုတာသိတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ သင့်ကိုသင်ပေးဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူး.. Energy တွေကိုလည်းအသုံးမချနိုင်ဘူး ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Project တွေနဲ့ကို ကျွန်တော့ ရဲ့ အချိန် 110 % လောက် ကုန်နေ ရလို့ပါဗျာ။ထားပါတော့ ကျွန်တော်ကသင်ပေးမယ်ပဲ..။ ခက်တာက Hacking ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သင်ယူရမယ့် attitude နဲ့ Skill ဖြစ်နေတာဗျ။ သင်အဲဒီလိုသာ သူများကိုသင်ပေးဖို့လိုက်ပြီးပြောနေရင် ဘယ်ဟက်ကာမှသင့်ကိုလေး စားမှာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်မဆိုးနဲ့ ချစ်လို့ပြောတာ။ Tongue (ကျွန်တော်လည်းဟက်ကာမဟုတ်ပါ)
Q: ဒါဖြင့်ရင် ကျွန်တော်ဘယ်လိုစရမှာလဲ?
A: Linux User Group တစ်ခုခုအရင်ရှာပြီးရင်အကူအညီတောင်းအရင်ဆုံး Linux တစ်ခု install လုပ်လိုက်တာ အကောင်း ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အလွယ်ဆုံးကိုပြောကြည့်တာပါ။
Q: ကျွန်တော်စဖို့နောက်များကျနေပြီလားမသိဘူးနော် ?
A: သင်စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင် အခုပဲစတာကောင်းပါတယ်။ လူအများစုကတော့ 15 ကနေ 20 ကြားထဲမှာ စ ကြတာပဲဗျ။ ဒါပေမယ့် မတူဘူးပေါ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့။
Q: ကျွန်တော် Hack နိုင်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဟင်?
A: သင့်မှာ အရည်အချင်း(Talent) ဘယ်လောက်ရှိတဲ့ ဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲဆိုတဲ့ပေါ်မှာပဲမူတည်မှာပေါ့ဗျာ။ တစ်နှစ်ခွဲ နှစ်နှစ်လောက်တစ်စိုက်မက်မက် မရပ်မနားလေ့လာရင် တော့ ဖြစ်သွားကြတာပါပဲ။ ဒီလောက်နဲ့တော့မပြီးဘူးနော် တ ကယ့် Master ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ဆယ်နှစ်အနည်းဆုံးပဲ။ ဟက်ကာအစစ်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြန်ရင်လည်း နောက်ကျ ကျန်မနေအောင်တော့ တစ်သက်လုံးလေ့လာရတော့မှာပေါ့။
Q: Visual Basic နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်ရင်ဘယ့်နှယ့်လဲ?
ဘူးနော်။ မလုပ်ပါနဲ့လားဗျာ.. ။ အဲဒါရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်။ Python တို့ C တို့ ကို ကျွန်တော် recommend လုပ်ထား
Q: ကျွန်တော် System တခုကို Crack လုပ်ချင်လို့ ကူညီပါလားဗျာ..။ ဒါမှမဟုတ်သင်ပေးပါလား ?
A: ဆိုးပါတယ်ဗျာ။ဒီ FAQ တွေကိုဖတ်ပြီးတာတောင်သင်ဒါမျိုးမေးဦးမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ educable မဖြစ်သေးဘူး တော်တော်လေးကို stupid ဖြစ်တာပဲဗျာ။ ဒါမျိုးကို Email နဲ့ မေးရင်လည်း ကျွန်တော်လျှစ်လျှူရှုထားမှာပဲ။
Q: ကျွန်တော်တခြားသူရဲ့ Gmail အကောင့်ရဲ့ password ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့… အဲဒါဘယ်လိုယူလို့ရမလဲ ?
Q: ကျွန်တော် Cracked လုပ်ခံလိုက်ရတယ်ဗျာ.. ။ ကူညီပေးပါ။
A: ဒါမျိုးမေးရင် သင်သုံးတာ Microsoft Windows ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ Windows System က ပုံမှန်အားဖြင့် Crack လုပ်တာကို ကောင်းကောင်း မကာကွယ်နိုင်ဘူးဗျ။ အကောင်းဆုံးက Linux ဖြစ်ဖြစ် well Design ဖြစ်တာ ပြောင်း သုံးဗျာ။
Q: ကျွန်တော့် Windows မှာ ပြသနာဖြစ်နေပြီ။ ကူပါဦး?
A: ကောင်းစရာတော့မလိုပါဘူး..။ trigo တို့ calculus တို့မလိုလောက်ပါဘူး.. (ချွင်းချက်ရှိနိုင်သည်) formal logic နဲ့ Boolean algebra တွေတော့လိုလိမ့်မယ်။ အဓိကက logical ကျကျတွေးနိုင်ရမယ်။ reasoning ကောင်းရမယ်။ intelligence ရှိရမယ်။
Q: ကျွန်တော် စလုပ်ချင်နေပါပြီ..။ စလုပ်ဖို့ တခုခုပေးပါ။
A: သင့်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ Talent ကိုမသိပဲကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရပါဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုနဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရမယ် သူများချပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်ရင် အောင်မြင်မှုနဲ့ဝေးသွားမှာပေါ့ဗျာ။
A: မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ Open Source Software Industry ရှိလာတဲ့အတွက် အလုပ်တွေပိုတိုးလာတာပဲ ရှိမယ်။ လျှော့မသွားဘူးလေဗျာ။ သူ့ဘာသူ open source ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးတဲ့သူက ပိုက်ဆံရမှာပဲလေ။ free software တွေဘယ်လောက်ပဲများများ သင်ပိုက်ဆံရမယ့်နည်းလမ်းရှိကိုရှိနေဦးမှာပါ။ သိပ်စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။
အရေးအသားမကောင်းပါက ကျွန်တော်ညံ့သောကြောင့်ဖြစ်ပြီး.. ကောင်းပါက မူရင်းစာရေးဆရာ တော်သောကြောင့်သာဖြစ်ပါကြောင်း.. မူရင်းဆောင်းပါးကိုသွားဖတ်ဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ Link:
Soruce; ငြိမ်းချမ်းလင်း ဘာသာပြန်ထားသည်ကို ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by Than Minn Naing at 6:24 PM